တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အန မျးလေးတှဖေလှယျကာပေးနကွေတဲ့ ဥက်ကာမငျးမောငျတို့ စုံတှဲရဲ့ ကွညျ နူးစရာပုံရိပျလေး – XB Media Myanmar
တဈခတျေတဈခါက ပရိသတျတှရေဲ့ ရငျထဲထိ နရော ဝငျယူထားနျိုငျသူကတော့ သရုပျ ဆောငျ မငျးသားဥက်ကာမငျးမောငျပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူဟာ လကျရှိမှာတော့ နယူးယော ကျမွို့တှငျ နထေိုငျနပွေီး အနုပညာအလုပျတှကေို အားရငျအားသလို လုပျကိုငျလကျြရှိ နတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူဟာ သရုပျဆောငျ ဘကျတှငျသာမကဘဲ အဆိုဘကျတှငျ လညျး ထူးခြှနျသူတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ခဈြသူနဲ့အတူ ပြျောရှငျကွညျနူးစရာကောငျးတဲ့ အခဈြခရီးလမျးကို အတူလြှော ကျလှမျးနကွေတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဝဖေနျမှုတှမြေားစှာရှိနသေျောလညျး အရာအား လုံးကို ခဈြသူနဲ့အတူ ကွံ့ကွံ့ခိုငျကာ ရငျဆိုငျဖွရှေငျးတာဟာလညျး ကွညျနူးစရာကောငျး တာပါ။ အခုမှာလညျး သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာ ပုံလေးတဈပုံ တငျထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကတော့ ” I’ll fly with you all over the world and eat everything. I’ll bake for you sugar cookies as long as I live. Happy Valentine’s baby. I am happy that you are mine. #myvalentine #happyvalentinesday #mybae #bf #lover #bestfriend #partnerincrime #iloveyou ” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာပါ။ ပရိသတျတှေ အတှကျ ခဈြရသူလေးကိုခြိုမွိနျတဲ့အနမျးလေးတှပေေးနတေဲ့ ဥက်ကာမငျးမောငျရဲ့ ပုံရိပျ လေးကို တငျဆကျပေးလိုကျပါတယျနျော။
Source and Photo Credit – Okkar Min Maung’s Facebook Account ,Referemce&Credit:MyanmarLoad.com
တစ်ခေတ်တစ်ခါက ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲထိ နေရာ ဝင်ယူထားန်ိုင်သူကတော့ သရုပ် ဆောင် မင်းသားဥက္ကာမင်းမောင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ လက်ရှိမှာတော့ နယူးယော က်မြို့တွင် နေထို င်နေပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို အားရင်အားသလို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိ နေတာလည်း ဖြစ်ပါ ယ်။ သူဟာ သရုပ်ဆောင် ဘက်တွင်သာမကဘဲ အဆိုဘက်တွင် လည်း ထူးချွန်သူတစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ချစ်သူနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့ အချစ်ခရီးလမ်းကို အတူလျှော က်လှမ်းနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဝေဖန်မှုတွေများစွာရှိနေသော်လည်း အရာအား လုံးကို ချစ်သူနဲ့အတူ ကြံ့ကြံ့ခိုင်ကာ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတာဟာလည်း ကြည်နူးစရာကောင်း တာပါ။ အခုမှာလည်း သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ ပုံလေးတစ်ပုံ တင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ” I’ll fly with you all over the world and eat everything. I’ll bake for you sugar cookies as long as I live. Happy Valentine’s baby. I am happy that you are mine. #myvalentine #happyvalentinesday #mybae #bf #lover #bestfriend #partnerincrime #iloveyou ” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာပါ။ ပရိသတ်တွေ အတွက် ချစ်ရသူလေးကိုချိုမြိန်တဲ့အနမ်းလေးတွေပေးနေတဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်ရဲ့ ပုံရိပ် လေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။